भारतीय निर्वाचनमा नेपाली चासो - Pahilo News
भारतीय निर्वाचनमा नेपाली चासो
–काठमाडौं । भारतमा लोकसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन बिहीबार हुँदैछ । भारतीय निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको चुनावअघि पश्चिम बंगाल राज्यमा विशेष चुनाव पर्यवेक्षक खटाएको छ ।
आयोगले बिहारका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी अजय नायकलाई विशेष पर्यवेक्षकमा नियुक्त गरेको छ । पहिलो चरणको चुनावमा पश्चिम बंगालका कूच बेहार र अलिपुरदुआर चुनाव क्षेत्रमा मतदान भइसकेको छ । बाँकी ४० स्थानका लागि विभिन्न ६ चरणमा चुनाव हुँदैछ । भारतमा हुने निर्वाचनमा जनमत पाउने हो भन्नेमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
यसअघि भएको निर्वाचनको माहोललाई आंकलन गर्दै बिहीबारबाट हुने निर्र्वाचनमा कुन पार्टीले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने हो भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
२०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले हात पारेको मतलाई अहिलेको निर्वाचनमा कायमै राख्न सक्ला ? त्यो भन्दा खस्केला वा अझ मजबुत बन्दै जाने हो ? भन्नेमा सबैको ध्यान गएको छ । यसअघि पहिले चरणमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, झारखण्ड, बिहार र दिल्लीमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
दोस्रो चरणमा १२ राज्यहरुको कूल ९५ सीटहरुमा मतदान हुँदैछ । निर्वाचनमा एक हजार ६३२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन् । निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेतादेखि निर्दलिय समेत रहेको छन् । निर्वाचनमा यति बेला सबै भन्दा बढी चर्चामा भारतीय कांग्रेस, भाजपा, डीएमके, बहुजन समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टी रहेका छन् ।
यसअघि सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा अधिकांश राज्यमा भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीको हात परेको थियो ।
उक्त निर्वाचनमा भाजपाले लोकसभाको लगभग ९० प्रतिशत सिटमा जित हात पारेको थियो । उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाञ्चल, दिल्ली, उत्तराखण्ड र गुजरातमा भाजपाले निकै सिट हात पारेको थियो । भाजपाले एक्लै ११ राज्यमा २१६ सिट जितेको थियो ।
भारतीय लोकसभा, कुन प्रदेशमा कस्को अग्रता
काठमाडौं– भारतीय लोकसभा निर्वाचनको मतदानको प्रारम्भिक गणनामा भारतीय जनता पार्टी भाजपा गठबन्धनले अग्रता लिएको छ..
अत्याधिक बर्षाका कारण पाँचको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित
तान्जानियाको दक्षिणपश्चिमी क्षेत्रमा अत्यधिक बर्षाका कारण कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । बर्षाकै कारण अरु ..
बेनी, ११ वैशाख । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेमा रहेको देउराली आधारभूत विद्यालयलाई प्रवासी एक परिवा..
काठमाडौ, २९ चैत । गैर आवासिय नेपाली संघ एनआरएनए युकेले बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितलाई ४ लाख ११ हजार रुपैया सह..